Cristiano Ronaldo Oo Jabiyey Rikoodhkii Goolasha Ee Belle Dhigay |
Xiddiga Juventus Cristiano Ronaldo ayaa jabiyay rikoodhkii goolasha rasmiga ah ee Pele isagoo dhaliyay goolkiisii 758aad kulankii ay Juventus 4-1 kaga badisay Udinese ee horyaalka Serie A.
Xiddiga reer Portugal ayaa haatan ka sarre maray goolashii uu dhaliyay abid halyeeyga reer Brazil, waxaa kaliya ka horeeya halyeeyga Czech Republic Josef Biscan oo heysta rikoodhka goolasha ugu badan la dhaliyay taariikhda dunida ee sida rasmiga ah loo diiwaangeliyay.
Biscan wuxuu waayihiisa ciyaareed dhaliyay 759 gool isagoo kubada cagta ciyaarayay intii u dhaxeysay 1931 iyo 1955, Ronaldo ayaa la filayaa inuu jabiyo rikoodhka goolashii ugu badnaa abid isbuucyada soo socda.
Xiddiga ay xafiiltamaan ee Lionel Messi ayaase weli kula tartami kara rikoodhkaan ka dib markii uu dhamaadkii 2020 jabiyay rikoodhkii Pele ee goolasha ugu badan ee loo dhaliyo hal koox isagoo haatan 644 gool u dhaliyay Barcelona.
Wadarta goolasha uu Lionel Messi u dhaliyay kooxdiisa iyo qarankiisa Argentina waxay gaarayaa 715 gool, laakiin madaama uu labo sannadood ka yar yahay Ronaldo waxaa macquul ah inuu soo qabto xiddiga reer Portugal.
Ronaldo ayaa xilli ciyaareedkan ka goolal badan Lionel Messi isagoo dhaliyay 18 gool halka Messi uu dhaliyay 10 gool tartamada oo dhan